Man United oo heshiis la gaartay weeraryahan weyn & xilliga uu soo caga dhigan doonto Old Trafford oo la sii ogaaday – Gool FM
(Manchester) 03 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United oo ka faa’ideysaneysa saacadaha yar ee ka haray suuqa kala iibsiga ayaa heshiis la gaartay weeraryahan weyn.
Red Devils ayaa la soo sheegayaa inay heshiis la gaartay weeraryahankii hore kooxda PSG ee Edinson Cavani, kaasoo noqonaya saxiixii labaad oo ay sameyso xagaagan, kaddib Donny van de Beek.
Manchester United waxaa ay heshiis labo sano ah la gashay weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani, kaasoo ay kula soo wareegeyso beeca xurta ah, kaddib markii uu ka tagay xiddigan kooxda reer France bishii June.
Wararku waxay intaas ku darayaan in Edinson Cavani uu u safri doono magaalada Manchester barri oo Axad ah, iyadoo si rasmi ah loog u soo bandhigi doono taageerayaasha habeen dambe ama maalinta Isniinta.
Man United ayaa heshiiska 33 jirkan waxa ay ku garaacday kooxaha Atlético Madrid iyo Benfica, kuwaasoo in mudo ah lala xiriirinaayay weeraryahankan.
Edinson Cavani ayaana mushaar ahaan uga qaadan doona kooxda ka arimisa garoonka Old Trafford isbuucii £200,000.
Dhinaca kale Man United ayaan wali ka quusan oo rajo ka qabta inay la soo wareegi doonaan daafaca reer Brazil ee Alex Telles, iyo xiddiga garabka ka ciyaara reer England ee Jadon Sancho.
Horudhac: Arsenal vs Sheffield United… (The Blades oo galabta baadi-goobeysa goolkii iyo dhibicdii ugu horreysay Premier League kal ciyaareedkan)